Etnimu - Materiaalit $("a.somali").click(); });
Tältä sivulta löydät somalinkieliset materiaalit.
Horumarinta caafimaad maskaxeedka!
Hoos u dhaca caafimaadka maskaxda iyo xanuunada maskaxda kuma xirna luqada, hab-dhaqanka iyo dhalashada. Buug-hagehaan idinka ayaa la idiin qoray, oo ah hagayaasha kooxaha, kuwaas oo horumarinaaya caafimaadka maskaxda ajnabiga Finland degan. Hagaha waxaa kale oo loogu talagalay waayeelka asalkoodu ajnabiga yahay kuwaas oo
xiiseynaya horumarinta caafimaadka maskaxdooda iyo arimaha ku saabsan xasuusta.
Macluumaadka ku saabsan xasuusta waxaa in badan lagu daabacay luqada finnishka. Hagahani wuxuu isu keenayaa hal qoraal oo akhrintiisu sahlantahay mowduucyada ugu muhiimsan ee xusuusta laga qoray. Hagahan waxaa laga sameeyey casharadii mashruuca ETNIMU uu dhigay 2015-2016kii. Casharada hagahan ku qoran waxaa lagu qoray
luqadaha kala ah: finnish, istooniyaan, ruush iyo af-soomaali.
Hagahan waxaa caawinaya tababarada buug-hagayaasha jimicsiga dardargelinta maskaxda 1 & 2, kaas oo lagu taliyey in lala isticmaalo
hagahan. Hagayaashan waa qalab u sahlaaya tababarayaasha kooxaha inay si isku mid ah u hagaan kooxaha ay tababarka siinayaan.
Qoraalada hagahan waxaa lagala tashaday qabiiro taqasus kala duwan leh, kuwaas oo kusoo kordhiyey fikrado dheeraad ah. Caawimaadoodana waan uga mahadcelinaynaa! Waxaan sidoo kale u mahadcelinaynaa kooxda mashruuca ETNIMU, wada-howlgalayaasha iyo ururka Suomen muistiasiantuntijat ry caawimaadey ka geysteen sameynta hagahan.
Qalqalka xusuusta, Jirooyinka xasuusta iyo Xusuus Xumo
Maskaxda faraxsan si wanaagsan ayey wax u xasuusataa
Hurdo iyo hurdo xumo
Si wanaagsan ula dhaqan qofka qaba cudurka xasuusta
Isbedelka dhaca markuu yimaado cudurka xasuusta
Calaamadaha digniinta ee cudurka xusuusta